Mba hampiharana tsara kokoa ny fitantanana mahia, hanatsara ny fahaiza-miasa ary hanitatra ny hevitra miasa, ny 15 martsa 2020, ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny famokarana dia nalamina mba hanao fiofanana manaraka maharitra herinandro. Ny atiny lehibe amin'ity fandinihana ity dia misy fizarana roa: ny fahaiza-miasa amin'ny mpiasa miasa ary ny fahaizan'ny fitantanana eo an-toerana. Ny marain'ny faha-16, teo ambany fitarihan'ny mpanara-maso ny famokarana, dia nanao fitsidihana sy fandalinana tsy tapaka izy. Ny tolakandro dia nahalala ny asa araka ny filaharan'ny fiovana izy, mifanaraka amin'ny fahaiza-miasa sy ny fitantanana eo an-toerana ny toerana. Mandritra ny fizotran'ny fianarana, ny mpiasan'ny ozininay dia fifehezana, mianatra mafy, mangataka torohevitra am-panetren-tena ary maneho toe-tsaina tsara.
Tamin'ny 10 May 2020, tapaka ny hevitra fa hanampy milina fanontana lamba maromaro sy treadmills. Mba hanontana printy tsara kokoa ny karazana lamina avo lenta, azo ampiharina amin'ny akora lamba isan-karazany koa izy io. Avy ao anatiny ka hatrany ivelany, dia manome fahafinaretana ho an'ny mpitafy mitafy soa aman-tsara. Mikasika ny kalitao, ny fikatsahana filaminana, tsy miova, famerenana amin'ny laoniny avo lenta, fanaraha-maso kalitao tsara kokoa, ary fikatsahana fanovana sy fanavaozana tsy tapaka amin'ny famolavolana, ny fomba ary ny fitaovana, hamoronana vokatra tsara kokoa.
Mba hanatsarana ny fahaiza-miasa sy ny hevitra momba ny asa, amin'ny 14 septambra 2020, avelao ny mpiasa mifandraika handray anjara amin'ny lahateny fahalalana fototra, ny atiny ianarana lehibe indrindra dia ny fizotran'ny tena atiny ifotony sy ny hevitra mifandraika amin'ny fahalalana teorika anatiny. Ny fifaninanana fahalalana eo amin'izy ireo dia mahatonga ny fahalalan'ny orinasany matihanina ho mafy orina sy lalina kokoa. Ao anatin'ny rivo-piainana milamina sy masiaka, ny mpiasa dia hanana fahatakarana tsara kokoa, ary ny tena fandidiana amin'ny tolakandro dia hahatonga azy ireo hahomby kokoa sy hahomby kokoa.